eSancharpati | #political news - eSancharpati #political news - eSancharpati
काठमाडौं । नवनियुक्त सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सरकारलाई सबै नागरिकको सरकार हो भन्ने प्रत्याभूत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकि छिन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तनहुँले दसैँका अवसरमा आज दमौलीमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सरकार सबै नागरिकको भएको समेत बताएकी हुन् । उनले पार्टीले आफूहरूलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताइन्…
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला अलपत्र परेको जनाएकी छन् । चितवन उद्योग संघको साधारणसभामा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनले रंगशाला निर्माणको काम अब सरकारले अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘देशकै गरिमा बोकेको रंगशाला निर्माणका लागि महानगरले जग्गा उपलब्ध गरायो, आवश्यक सबै सहयोग गर्‍यो। तर स्रोत जुटाउने…
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गृह जिल्ला चितवनमा झट्का लागेको छ । त्यहाँ लगभग चार दर्जन बढी प्रभावशाली नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेपछि अध्यक्ष दाहाललाई झट्का लागेको हो । राप्ती नगरपालिकामा माओवादीका प्रभावशाली नेताहरु एमाले प्रवेश गरेका छन । सो नगरपालिकामा आज आयोजित कार्यक्रममा माओवादीसहित विभिन्न पार्टी परित्याग गरी ४५ जना नेता…
भक्तपुर । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका इन्चार्ज एवम् नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई एमालेसँग निहुँ नखोज्न चेतावनी दिएका छन् । विजया दशमी, दिपावली, नेपाल सम्वत् तथा छठ पर्वको अवसरमा राष्ट्रिय युवा संघ...
नेकपा एकीकृत समाजवादीको चुनाव चिन्ह ‘कलम’
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम लिने पक्का भएको छ । यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एसको नाममा कलम चिन्ह नै रहेको छ । युवा नेता जीवन राईले आफ्नै अध्यक्षतामा यही वैशाखमा नेकपा एकीकृत दर्ता...
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार २०:१६
कमजोर मन्त्रालय दिएको भन्दै माधव नेपालको चित्त दुखाइ
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार पुगेका छन् । मन्त्रिण्डलको भागबण्डा गर्दा आफ्नो पार्टीलाई कम महत्वका मन्त्रालयमात्रै दिइएको भन्दै अध्यक्ष नेपाल रुष्ट बनेका छन् । उनी यसै सम्बन्धमा कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास...
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार १९:५५
आरजुलाई माफियाको संज्ञा दिंदै डा. केसीद्वारा अनसनको चेतावनी
काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु देउवाविरुद्ध खनिएका छन् । उनले आरजुलाई माफियाको संज्ञा समेत दिए । उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यको नीति निर्माणमा आरजुको हस्तक्षेप भएको भन्दै रोकिनुपर्ने माग राखेका छन् ।...
२१ आश्विन २०७८, बिहीबार १९:४७
प्रकाशशरण महत नेतृत्वको कांग्रेस टिम भारत भ्रमणमा जाँदै
काठमाडौं । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार भारत भ्रमणमा जाने भएको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र सरकारसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको ३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नयाँ दिल्ली जान लागेको श्रोतले...
२० आश्विन २०७८, बुधबार २०:३१
जनकपुर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत पाएका छन् । उनले आज विश्वासको मतका लागि भएको मतदानमा १०७ कुल मतमध्ये ७७ मत प्राप्त गरेका हुन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका उनको पक्षमा जनता समाजवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा...
२० आश्विन २०७८, बुधबार २०:१८
प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएको कारण वरिष्ठ अधिवक्ताहरुद्वारा चियापान कार्यक्रम बहिस्कार
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको चियापान कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई पनि बोलाइएको कारण बहिस्कार गरेका छन् । सर्वोच्च बारले बुधबार दशैंको अवसरमा चियापान कार्यक्रम राखेको थियो । मन्त्रिपरिषदमा भागवण्डा खोजेको लगायतका विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीशको काम कारबाहीमाथि प्रश्न...
२० आश्विन २०७८, बुधबार २०:१३
खेलक्षेत्रलाई क्रियाशील र चलायमान गराउनुुपर्छ– मन्त्री गहतराज
मंसिर १ गते बुधबार- हेर्नुहोस आजको राशिफल
मंसिर ५ गते आइतबार, यस्तो छ आजको राशिफल।